Inona no atao hoe Neuro Design? | Martech Zone
Sabotsy, Martsa 4, 2017 Sabotsy, Martsa 4, 2017 Darren Bridger
Neuro Design dia saha vaovao sy mitombo izay mampihatra hevi-baovao avy amin'ny siansa saina hanampiana amin'ny famolavolana endrika mahomby kokoa. Ireo fomba fijery ireo dia azo avy amin'ny loharano lehibe roa:
Ny fitsipika ankapobeny an'ny Fomba fanao tsara indrindra amin'ny Neuro Design izay nalaina avy tamin'ny fikarohana akademika momba ny rafitry ny fahitana ny olombelona sy ny psikolojia fahitana. Anisan'izany ireo zavatra toa ny faritra eo amin'ny sehatry ny fahitana antsika izay mora tohina kokoa amin'ny fanamarihana ireo singa hita maso, ka amin'izany dia manampy ireo mpamorona hamorona sary mahomby kokoa.
Ireo masoivohon'ny famolavolana sy ny marketing, ary koa ny tompona marika, dia mihabe nanangana ny fikarohana neuro azy ireo manokana hanombanana ireo safidy famolavolana manokana. Ohatra, raha mieritreritra ny hamelombelona tanteraka ny endriny fonosana ny marika iray, dia mety te-hizaha karazana fiovana maromaro izy ireo, amin'ny alàlan'ny mpanjifa hanombanana izay mampiseho ny mety indrindra.
Araka ny fomban-drazana, ny fikarohana momba ny famolavolana ny mpanjifa dia mety nametraka fanontaniana, toy ny:
Iza amin'ireo endrika ireo no tianao indrindra ary nahoana?
Na izany aza, ny fikarohana nataon'ny psikology akademika dia naneho fa manana fahaizana voafetra tokoa izahay hahatakatra tsara ny antony itiavantsika sary sasany. Ny ampahany amin'izany dia satria be dia be ny asa izay ataon'ny atidohantsika hamahana sy hahafantarana ny sary dia tsy takatry ny saina; tsy fantatsika tsotra izao izany, satria nivoatra isika mba hanana fanehoan-kevitra haingana amin'izay hitantsika.
Fantatsika rehetra ny fomba mahatonga ireo fihetsehana tampoka eo am-bavan'ny masontsika manaitra antsika - fahatsapana nolovaina mba hiarovana antsika amin'ny biby mpiremby - fa misy fitongilanana hafa koa ao anatiny. Ohatra, manao fitsarana haingana (ao anatin'ny antsasak'adiny) amin'ny sary sy ny endrika isika, raha mahita azy ireo eken'ny besinimaro na tsia. Ireo fahatsapana voalohany haingam-pandeha sy tsy fahatsiarovan-tena ireo dia manavakavaka ny eritreritsika sy ny fihetsika ataontsika mifandraika amin'izany famolavolana izany.
Ny mahatonga an'ity olana ity ho an'ny mpikaroka mampiasa fanontaniana dia ny hoe rehefa tsy fantatsika ireo karazana fitongilanana tsy fahatsiarovan-tena ireo dia tsy fantatsika ihany koa fa tsy fantatsika! Matetika isika tarihin'ny filàna hiseho amin'ny fifehezana ny fitondran-tenantsika manokana ary mba hisehoany mifanaraka sy mitombina amin'ny tenantsika sy ny hafa io fihetsika io.
Mifanohitra amin'izany, maro amin'ireo mpamily tsy fantatra ny saintsika momba ny volavola no tsy mitombina amin'ny saintsika tonga saina. Raha tokony hilaza fotsiny aho hoe 'Tsy fantatro ny antony nahatonga an'izany fihetsika izany', na 'Tsy fantatro ny antony nisafidianako an'io vokatra manokana io teny amin'ny talantalana fivarotana lehibe raha oharina amin'ireo mpifaninana rehetra', ataontsika izay antsoin'ny psikology ' confabulate ': manao fanazavana azo antoka momba ny fitondran-tena izahay.
Fanaraha-maso ny hetsika amin'ny tarehy
Mifanohitra amin'izany, ny fomba fikarohana drafitra neuro dia tsy mangataka amin'ny olona haminavina an-tsaina ny antony itiavany sary, fa kosa maneso ny fihetsiky ny olona amin'ny fomba malina maromaro. Ny sasany amin'ireny dia fandrefesana mivantana ny sain'ny olona rehefa mijery sary izy ireo, na mampiasa scanner fMRI na satroka misy sensor EEG. Ny fakan-tsary maso maso dia azo ampiasaina handrefesana tsara ny toerana hijerentsika sary na horonan-tsary. Teknika nantsoina Fanaraha-maso ny hetsika amin'ny tarehy mamoaka fampahalalana momba ny fihetsika ara-pihetseham-po ataontsika amin'ny sary amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny fiovana vetivety amin'ny hozatry ny tarehintsika (ohatra ny fihetsem-pon'ny fihetsem-po).
Fitsapana ny valiny azo tsapain-tanana
Fomba hafa tsy fantatra nefa matanjaka, antsoina Fitsapana ny valiny azo tsapain-tanana, mandrefy ny fifandraisanay mandeha ho azy eo amin'ny sary sy ny teny rehetra - toy ny teny mamaritra ny fihetsem-po, na ny iray amin'ireo mari-pamantarana omen'ny sary vahana. Ny herin'ny teknika toy ny fanaraha-maso, ny Coding amin'ny tarehy, ary ny fitsapana ny valiny azo tsapain-tanana, dia azo atao an-tserasera daholo izy ireo, amin'ny fampiasana webcam na solosaina an-trano na takelaka. Ity teknika fanandramana vaovao ity dia ahafahana mizaha mpanjifa an-jatony amin'ny vidiny ambany lavitra noho ny mitondra olona any amin'ny laboratoara hanaovana scan an'ny ati-doha.
Ny fikarohana sy ny hevitra momba ny famolavolana Neuro dia ampiasain'ny indostria isan-karazany manerana ny karazana endrika. Ny tranokala, fonosana fivarotana lehibe, famolavolana vokatra, ary marika marika dia anisan'ny faritra maro izay notarihan'ny fitsapana ny endrika neuro. Ohatra iray mahazatra ny Tesco goavambe lehibe. Nampiasa fomba fikarohana maro momba ny famolavolana neuro izy hanatsarana ny endrika fonosana vaovao ho an'ny sakafo fisakafoanana vonona 'Tsara indrindra'.
Mampiroborobo ny fahaizan'ireo fonosana hisintona ny saina any amin'ny magazay, ary hampita ho azy ny kalitao tsara irina. Ohatra iray hafa ny trano famoronana endrika any London, Saddington Baynes. Izy ireo izao dia mihazakazaka tsy tapaka Implement Response Tests mba hanampiana hahatakatra bebe kokoa ny fandraisan'ny olona ny foto-keviny rehefa mampivelatra azy ireo izy ireo, ary avy eo manadio ny endriny mifanaraka amin'izany.
Ny famolavolana neuro dia tsy natao hanolo ny famoronana, ny aingam-panahy na ny fanahin'ny mpamorona olombelona. Fitaovana ara-teknika vaovao fotsiny izy io mba hanampiana amin'ny fanamafisana ny fahatsapan'izy ireo manokana ny fomba mety hamalian'ny mpanjifa ny heviny. Ny mpanakanto sy ny endrika amam-bika dia manana tantaram-pitiavana hatrizay amin'ny fampiasana teknolojia vaovao hanatsarana ny asany. Ny famolavolana Neuro dia afaka manampy azy ireo amin'ny fanitarana ny fahaiza-manaony manokana amin'ny fomba mitovy amin'ny fitaovana toy ny Photoshop manitatra ny fahaizany manao sary.
Momba ny Boky: Neuro Design
Androany, ny orinasa amin'ny habe rehetra dia miteraka haino aman-jery sary an-tsary sy atiny mamorona, ao anatin'izany ny tranokala, fampisehoana, horonan-tsary ary lahatsoratra amin'ny haino aman-jery sosialy. Ny ankamaroan'ny orinasa lehibe, ao anatin'izany ny Procter & Gamble, Coca-Cola, Tesco ary Google, dia mampiasa fikarohana sy teoria momba ny neurosains ankehitriny hanatsarana ny atiny nomerika. Volavola Neuro: Hevitra Neuromarketing hampiroborobo ny fifandraisana sy ny tombom-barotra, manokatra izao tontolo izao teoria sy tolo-kevitra momba ny famolavolana neuromarketing, ary mamaritra ny fahitana avy amin'ny sehatry ny neuroaesthetics mihamitombo izay ahafahan'ny mpamaky manatsara ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny tranokalany ary manatsara ny tombom-barotra.
Mitsitsia 20% miaraka amin'ny kaody fihenam-bidy BMKMartech20
Tags: eegandraikitrafanarahana masoFanaraha-maso ny hetsika amin'ny tarehyfMRIFitsapana ny valiny azo tsapain-tananafamolavolana neuroneuromarketingfamolavolana neuromarketingprofitabilitynohaniny
Darren Bridger dia miasa amin'ny maha consultant ny mpamorona sy ny mpivarotra azy, manoro hevitra ny amin'ny fampiasana sy famakafakana data izay miditra amin'ny eritreritra sy ny antony manosika ny mpanjifa. Izy dia iray amin'ireo mpisava lalana tany am-boalohany an'ny indostria Neurosains momba ny mpanjifa, nanampy tamin'ny asan'ny mpisava lalana roa amin'ireo orinasa voalohany teo an-kianja, avy eo niditra tao amin'ny masoivoho lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, Neurofocus (ao anatin'ny orinasan Nielsen ankehitriny), ho mpiasa faharoa ivelan'i Etazonia. . Izy dia miasa amin'ny maha lohan'ny fahitana ao amin'ny NeuroStrata.